आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण १२ गते मंगलबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण १२ गते मंगलबार
साउन १२, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण १२ गते मंगलबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई २७ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणकृष्णपक्षको चतुर्थी तिथि मध्यरात्रि पछि ४:२४ बजेसम्म, त्यसपछि पञ्चमी रहनेछ ।
मेष : व्यवसाय फस्टाउनेछ । काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ । मानसिक क्षमताको विकास हुनेछ । काम गरेर विश्वास दिलाउन सक्दा नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ । वेलुकी पख कार्यमा केही तनाब बढ्ने देखिन्छ ।
वृष : विशिष्ट व्यक्तिसँग सम्पर्क रहनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । बोलिकै भरमा ठूला कार्य बन्नेछन् । नयाँ ज्ञान तथा सिप सिक्ने अवसर मिल्नेछ । इमान्दारिताको कदर हुनेछ ।सामाजिक प्रतिष्ठा बढेर जानेछ ।
मिथुन : कडा परिश्रम गर्नु परेता पनि सही मूल्यांकन मिल्दा खुसी लाग्नेछ । पारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ । कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हने मौका मिल्नेछ । सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ ।
कर्कट : अल्छि गर्ने बानीले गर्दा विशेष अवसर फत्कन सक्छ, जागरुक भएर कार्य गर्नुहोला । ज्यादा परिश्रम गरेपछि मात्र कार्य बन्नेछन् । शारीरिक सिथिलताले सताउनेछ । साँझ पख आकस्मिक लाभ होला ।
सिंह : विपरीत लिंगीको साथ समर्थन मिल्नेछ । श्रीङ्गारिक कार्यमा मन जानेछ । नयाँ कार्यको थालनि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने समय शुभ रहेको छ । नेतृत्वदायी कार्यको जिम्मेवारी पाइनेछ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ ।
कन्या : हिम्मत बढ्नेछ । बन्दव्यापार एवं श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरुका लागि विशेष लाभकारक समय रहेको छ । अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ । शत्रू पक्ष कमजोर बन्नेछन् ।
तुला : शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति नै हुनेछ । आफन्तजनसँग टाढिएको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । मिष्ठान्न भोजनको योग बनेको छ । आत्मबल आत्मविश्वास थपिनेछ । आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ । हर्ष बढ्नेछ ।
बृश्चिक : पारिवारिक समस्याले गर्दा काम गर्ने वातावरण बन्ने छैन । जिम्मा लिएका कार्य समयमै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानु पर्नेछ । नियमित कार्यमा नै व्यस्थ रहनुहोला । मातृपक्षको सरसल्लाहमा अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ ।
धनु : नयाँ मित्र बनाइनेछ । सहोदरका साथीभाइको सहयोगले गर्दा नयाँ कार्यको थालनि गरिनेछ । व्यवसायमा सोचे अनुरुप लाभ मिल्दा खुसी लाग्ने छ । छोटो रमाइलो यात्राको संभावना समेत बलियो रहेको छ ।
मकर : सानातिना समस्या देखा परेता पनि दृढताका साथ लाग्दा सफल भइनेछ । धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्रा नहोला भन्न सकिन्न । धन संचय गर्न मन लाग्नेछ ।
कुम्भ : आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । बोलि वचनमा मिठासता आउनेछ । ठूला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ । प्रेम भाव जाग्नेछ । व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ । सामान्य प्रयासले नै कार्य बन्नेछन् ।
मीन : नकारात्मक व्यक्तिको संगतले गर्दा समस्यामा परिन सक्छ, सतर्क रहनु होला । आफ्नै कारणले गर्दा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु पर्नेछ । अरु दिनको तुलनामा शैक्षिक क्षेत्रमा नतिजा गीरावट आउने देखिन्छ ।